トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ ithebula pachinko esitolo ukukhetha ngesikhathi uwavule
On the kuqala usuku esikhundleni Xintai, idatha ke akukho, ngokuba isimo ulwazi khona, ukuze Neraiuchi ukukhetha platform yinto enzima. Xintai ngosuku lokuqala, akusho ukuthi evulekile kusukela ekuseni, uzovulelwa kusukela lapho imvume yamaphoyisa iphansi. Ngenxa yalesi sizathu, esikhathini hhayi ukususa kuvulwa nini, sivamile pachinko eshintsha une ilotho. Ngaphezu kwalokho, kuye ngokuthi indlela ilotho, sicela uqaphele ukuthi kukhona icala ngabe hit lapho Xintai ungazi.
Xintai esikhundleni ngosuku lokuqala, ngoba akukho isikhathi esanele ukufunda yonke nail, shiya esigabeni lapho ukubheka, kodwa futhi baba kuphela yokuthi kuqale nail inkaba. Yiqiniso, uma aqoqene idatha efana idatha Robo indawo Seven, igagasi Horukon simondzawo ROM ake ikhumbule.
Nokho, ebuka ukulungiswa nail, ukuze udonse amakhasimende, kuyinto Xintai esikhundleni ngosuku lokuqala iyona engcono kunazo nail amnandi.
njengoba Horukon isethi nail ukulungiswa Xintai ivuliwe ngosuku lokuqala iyona engcono, kukhona uya ukuthambekela qinisa usuku ngalunye oludlulayo. Yiqiniso, futhi kuncike esitolo. Kusukela ngosuku lokuqala, izivakashi futhi abuthele Ngiyeke, abanye izitolo ukuvumela ukukhulula kancane kancane wasimama, kukhona esitolo aphume ngosuku lokuqala ngoba ngifuna kuqala kubika iKickOff.com ngoLwesithathu. Le ndawo, nokuthambekela kwezinhliziyo esingangesonto ngokushesha ngemva kuvulwe kungaba ngcono ukugcina isheke nsukuzonke.
nesikhathi uwavule kunjalo, ezifana esitolo esiteshini, njengoba kulindeleke ukuthi amakhasimende amaningi ukuminyana, kuba kusengaphambili sokuhlolwa kwesikhashana futhi sihlose etafuleni kusukela ngayizolo kuya isiqinisekiso idatha ubukeka umuntu omuhle owayekade wafunda ngokwezinga elithile .